Roobab ay ku diirsadeen dadka iyo duunyada oo ka da’ay Beledweyne Saameyna Ku Yeeshay Dadka – Radio Muqdisho
Kadib markii saacadihii la soo dhaafay roobab xoogan ay uga da’een magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa lagu diirsaday inkastoo lagu soo waramayaa in saameyn uu ku yeeshay dadka iyo duunyada ku dhaqan magaaladaasi.
Magaalada Beledweyne waa xarunta gobolka Hiiraan wararka ka imaanaya ayaa sheegayaa in isu socodkii magaalada uu hakad ku yimid taas oo ay sabab u tahay daadadkii ka dhashay roobab xalay ilaa saaakay halkaasi ka da’ay.
Garoonka diyaaradaha ee magaalada Beledweyne ayaa waxaa uu kamid yahay meelaha sida aad ah uu u sameeyay roobabkaasi, waxaana ciidamada AMISOM ee ku sugan magaaladaasi ay wadaan dadaalo ay ku doonayaan in ay ku caawiyaan dadka saameynta uu ku yeeshay Roobabka.
Ma ahan oo kaliya garoonka diyaaradaha Beledweyne ee Ugaas Khaliif meelaha ay saameeyeen roobabka ka da’ay magaalada Beledweyne, waxaa sidoo kale saameyn ay ku yeesheen dadka barakacyaasha ah oo ku nool xerooyinka ku yaala Beledweyne, Wariyaha Warbaahinta Qaranka ee gobolka Hiiraan Cowke ayaa soo sheegaya in dhibaato aad u xoogan ay ka soo wajahday barakacyaasha roobabkii isdaba jooga ahaa ee ka da’ay Beledweyne Saacadihii la soo dhaafay.
Wariye Cowke ayaa sidoo kale soo sheegaya in guriyihii ka sameysnaa Cowshadaha oo barakacyaasha ay deganaayeen inta badan uu la tagay roobka waxaana dadkaasi codsanayaan in la caawiyo maadaama dhibaatadii horey u qabeen hadda mid kale ugu darsan tahay.
Inta badan Qoysaskii ku noolaa Xaafadaha Magaalada Beledweyne xalay waxaa ay u aheyd habeen soo jeed ah kadib markii xalay ku soo rogmadaan Fatahaado ka dhashay Roobab ka da’ay Magaalada Saacada badan.
Roobab xoogan oo ka da’ayay saacadihii la soo dhaafay ayaa sameeyn dadka iyo duunyada ku dhaqan magaaladaasi roobab xoogan nolosha dadka dhaq dhaqaaqii ganasiga ciidamada oo wada gurmad loo fidinayo dadka waxaa hakada howsha airporka
Boob xoogam oo saameyn ku yeeshay ganacsatada Soomaaliya koonfur Africa dadka ajaanib naceybka ee koonfur Africa waxaa jira wel wel iyo cabsi ay qabaan oo ku aadan in boob loo geysto xaruumahooda ganacsi ka sokow dadka soomaalida waxaa kale oo jira dadka kale oo ajaanib ah oo boob lagu hayo kuwaa oo ay ka mid yihiin dadka itooniyaanka.
Xaalada ay ku sugan yihiin soomaalida ku nool dalka koofur africa aya sii xumaaneysa malmahan waxaana jira rabshado ajnabi naceyb ah oo ka socday dalka koofur africa ayada oo dadka rabshdaha dhigayana ay kusii fidayaan deegaano hor leh.
Hadaba magaalada Johanesburg ee dalka koofur frica ayaa xalay cabsidaasi ay ka taagneyd waxaana laga cabsi qabaa in halkaasi ay ka bilowdaan rabshadaha looga soo horjeedo dadka ajaanibta ah.